ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင် - မီးဖိုချောင်များအတွက်ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ
ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင် - ခေတ်သစ်အတွင်းပိုင်းတချို့စိတ်ဝင်စားဖို့စိတ်ကူးများနဲ့ options
ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်ကဲ့သို့သောခေတ်မီသောအရာတို့ကို, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီ။ ဤသည်ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏လျှပ်, အရောင်ကျယ်ပြန့်၏ရေပန်းစားသည်။ ကနေသင်တို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ကုလားထိုင်၏မျက်နှာပြင်သာမန်အားဖြင့်ချောမွေ့မြန်ဆန်, မည်သည့် configuration ကိုတစ်ထုတ်ကုန်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့သောပရိဘောဂလက်တွေ့ကျကျစိုစွတ်သောသန့်ရှင်းရေး မှလွဲ. အဘယ်သူမျှမပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘားထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, ဥယျာဉ်များနှင့်ဥယျာဉ်, မီးဖိုချောင်, ကလေး, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များ, Multi-ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့-စင်ပေါ်များအတွက်ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင် - ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား type ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေအများကြီးလိုအပ်ချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ, အစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသိုလှောင်မှုပရိဘောဂဖြစ်နိုင်သောကြွင်းစေရ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်များအတွက်တစ်ခါသုံးခွက်များကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့ခေါက်ကြောင်း stackable ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီပရိဘောဂ၏အတိုင်းအတာကြီးမားသည်။
မီးဖိုချောင်ကုလားထိုင်ကိုပိုပြီးမကြာခဏကတခြားအခန်းထက်အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ကြာရှည်ခံမှုစံများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏လွယ်ကူခြင်းထိုကဲ့သို့သောပရိဘောဂများ၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆေးကြောဖို့လွယ်ကူပါတယ်မီးဖိုချောင်များအတွက်ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်, သူတို့ထမင်းစားခန်းဧရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ယင်းပျော့ပစ္စည်းမှာ, ထိုင်ဖို့အလွန်အဆင်ပြေသောလူ့ခန္ဓာကိုယ်, ပတ်ပတ်လည်စီးဆင်း, မော်ဒယ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလားထိုင်အစွမ်းသတ္တိ၏အရေးကြီးသောအဆင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအခါ။ ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်မှ, သတ္တုဘောင်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရောင်သည်ထို့နောက်ရှေးခယျြမှုကြီးမား - ထိုဂန္အဖြူရောင်, အနက်ရောင်အရောင်များအပြင်, သင်တောက်ပတဲ့အရောင်အစီအစဉ်၏မူလပုံစံများနှင့်အတူမီးဖိုချောင်အဘို့ရှင်းလင်းစွာသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်နာပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကြားအဓိကကွာခြားချက် ဘားထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ - သူတို့ရဲ့အမြင့်သူတို့ကစံထက်မြင့်သောကြောင့်, ထိုင်ခုံ, 75-85 စင်တီမီတာ၏အဆင့်မှာခြေလှမ်းများ၏တည်ရှိမှုနေရာချထားရမည် - ။ တစ်ဦးအဆင်ပြေလူ့အစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်သော။ ထိုင်ခုံမော်ဒယ်အဆင်ပြေနေရာချထားဘို့, အသေးစားသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်, ပတ်ပတ်လည်နှင့်စတုရန်းနိုင်ပါတယ်နိမ့်နောက်ကျော၏ကျောနှင့်ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာတပ်ဆင်ထားကြသည်။ universal မော်ဒယ်များချိန်ညှိခွကေိုရှိသည်။ ထောက်ခံမှုများအတွက်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်း - သတ္တု, တကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအမြင့်ရှိပါတယ်။ အကြောင်းမူကား,
ဘားများအတွက်ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်၏အရောင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံ၏အကွာအဝေးကြီးမားသည် - သင်တက်ကောက်နိုင်သည်
်ထိုင်ခုံ-ပန်းကန် Nouveau တောက်ပသောအရောင်အဆင်းထူးထူးခြားခြားကွေးခြေထောက်။
ပြင်ပနှင့်ဥယျာဉ်ပလပ်စတစ်များအတွက်ခေတ်သစ်ကုလားထိုင် -, မိုဘိုင်းပေါ့ပါး, အကြမ်းခံ, မိုးမကြောက်နှင့်မဆိုညစ်ညမ်းမှုချွတ်ဆေးကြောဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဤသည်ဗိမာန်တော်၌နေ့တိုင်းရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထားတဲ့ပြင်ပပရိဘောဂရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအမျိုးမျိုးသောအရောင်ရရှိနိုင်ကြသည်။ တစ်ဦးအဆင်ပြေ chaise longue သို့ကူးပြောင်းနိုင်ခေါက်မော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များအလွယ်တကူ stack ခေါက်နိုင်ပါတယ်သော stackable ကုလားထိုင်ဖြစ်ကြသည်။
အများစုမှာမော်ဒယ်တစ်ဦး Ergonomics ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကြံ့ခိုင်ခြေထောက်ရှိသည်။ သူတို့တစ်တွေအပြည့်အဝထိုင်ခုံအဖြစ်, ကြော့ headboards နှင့်အဆင်ပြေဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ မော်ဒယ်များကိုသူတို့နှစျသိမျ့တိုးမြှင့်ကြောင်းခေါင်းအုံး, pads နှင့်အတူထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပလပ်စတစ်စားပွဲအစုတခုအတွက်သူတို့ကိုဝယ်လျှင်တစ်သွန်းတည်ဆောက်, သင်အိမ်ပြင်တဲ့ပျူငှါနွေးထွေးသောထမင်းစားခန်းဧရိယာရနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်နာရီအနည်းငယ်တစ်နေ့အဘို့၌ထိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ကိုင်ပရိဘောဂ, Ergonomics ဖြစ်သင့်သည်။ ပလပ်စတစ်ကွန်ပျူတာကုလားထိုင်အကောင့်သို့လူသား၏အပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ယူရာပြည့်စုံတဲ့ထိုင်ခုံဖြစ်ကြသည်။ Ergonomics ဒီဇိုင်းကြောင့်အမျိုးမျိုးသောဒြပ်စင်မှအောင်မြင်သည်:
နောက်ကျော - တစ်ကွေးပုံသဏ္ဌာန်ရှိသင့်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံ - padding ကိုအလတ်စား, ခိုင်မာသောတပ်ဆင်ထား။
ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာ - အကူအညီနဲ့အပေါ်အမှီနှင့်နောက်ကျောနှင့်ပခုံးကနေဝန်ကိုချွတ်ယူအဆင်ပြေပါတယ်။
roller အပေါ်ငါးလမ်းထောကျပံ့ - သင်ပြုပြင်ဧရိယာအတွင်းလွတ်လပ်စွာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
base - ဝန်အကြမ်းခံပလတ်စတစ်သို့မဟုတ်သံမဏိဖန်ဆင်းထားသည်အားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်ဖြန့်ဝေ။ ဒါဟာဓာတ်ငွေ့သည့်အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အမြင့်ကိုထိန်းညှိပေးသောတစ်ခုဓာတ်လှေကားနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး။
ကွန်ပျူတာပရိဘောဂ, အကြမ်းခံပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အသွင်အပြင်ထိုင်ခုံကူရှင်ချုပ်၏အရွယ်အစား, ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ပစ္စည်းပေါ်တွင်မူတည်သည် - သင်အဖြူကိုဖန်ဆင်းတဲ့စတိုင်ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်, အနက်ရောင် faux သားရေအစိုင်အခဲဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးထက်ပိုဘတ်ဂျက်, ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေမော်ဒယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ upholstered ထည်ကောက်လို့ရပါတယ်။
သားသမီးတို့အဘို့ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်၏ပိုင်ထိုက်သောသူတို့ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ချွန်ထက်ထောင့်, ကောင်းတဲ့တောက်ပတဲ့အရောင်မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့သားသမီးတို့အဘို့ပရိဘောဂ, အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများထုတ်လွှတ်မထားဘူး။ မော်ဒယ်အရွယ်အစားဟာအထူးသဖြင့်ကလေးကပေါ်တက်လာသောအဓိကအရာ - ရွေးချယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့စံနှုန်းဥက္ကဌ၏အမြင့်သည်။ ပရိဘောဂဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီးလွယ်ကူသည်ထိုင်ခုံတစ်ကျောတပ်ဆင်ထားသည်။
မကြာခဏရောင်စုံပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလှဆင်ငယ်အဘို့အမော်ဒယ်များ, ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကများအတွက်ကုလားထိုင်များအတွက်ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံတစ်ဦးအဆင်ပြေစားပွဲပေါ်မှာကုလားထိုင်သို့ပရိဘောဂပြောင်းလဲ, တင်းကျပ်စွာလျောက်ပတ်ပျော့တောက်ပပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ မကြာခဏဤအမော်ဒယ်များအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေအနေအထား၏ရွေးချယ်ရေးဘို့အမြင့်, backrest ထောင့်ကိုထိန်းညှိဖို့နိုင်စွမ်းရှိသည်။
အဆိုပါထမင်းစားခန်းစားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ်အလုပ်မှာထိုင်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာနှင့်အတူပလတ်စတစ်ကုလားထိုင်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သူတို့ကိုနောက်ကွယ်မှအဆက်မပြတ်ကြောင်းလျင်မြန်စွာတာယာအလေးချိန်ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ပိုမိုအဆင်ပြေနှင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့သောမော်ဒယ်များ Ergonomics ကုလားထိုင်စေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအမတ်နေရာထံသို့ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဤသည်ပရိဘောဂကဝယ်ယူအကောင့်ထဲသို့အခန်း၏အရွယ်အစားနှင့်စားပွဲပေါ်မှာယူရန်လိုအပ်သောအခါ ပို. headroom ဖြစ်ပါတယ်။
ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာဒဏ်ငွေဘား၏ပုံစံအတွက်ထုတ်လုပ်သောသို့မဟုတ် backrest အတူခေါက်အပိုင်းအစပုံသွင်းထိုင်ခုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင် - အားလုံးပရိဘောဂဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာပလပ်စတစ်မီးဖိုချောင်အကူအညီဖြင့်ကုလားထိုင်အငြိမ့်တစ်ဦးသည်ဖြည်းဖြည်းမုန့်ညက်နှင့်သာယာသောစကားပြောဆိုမှုတွေအတွက်စားပွဲ၌ထိုင်။ အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များတိုင်းပြည်အတွက်, ဥယျာဉ်တော်၌, ကြွင်းသောအရာ၏သောနေရာများအတွက်တကွတဲ၏အစီအစဉ်များအတွက်မော်ဒယ်ဖြစ်ကြသည်။
ဘက်စုံသုံး ကုလားထိုင်-လှေကား footrests - နှစ်ခုသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုခြေလှမ်းများတပ်ဆင်ထားတဲ့မစင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကထိုင်သို့မဟုတ်ရပ်တည်ရန်အဆင်ပြေဖြစ်ကြသည်။ တစ်မစင်၏ချိန်းဆို - အထက်မြင့်တက်နှင့်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ထိပ်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကနေတပ်မက်လိုချင်သောပစ္စည်းကိုရယူနိုင်စွမ်း။ ခြေလှမ်းများအတွက်နှစ်ဦးစလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေးမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ အခုတော့အဆင်ပြေထိုင်ခုံနှင့်ခြေထောက်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးပလပ်စတစ်ကုန်းပတ်ကုလားထိုင်နှင့်လှေကားရှိပါတယ်။ သူတို့ခေါက်အဖြစ်, သူတို့ကနည်းနည်းအာကာသကိုတက် ယူ. , ဆက်ရေးပြည်နယ်အတွက်အလိုရှိသောအမြင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုမယ့်အဆင်ပြေလှေကားသို့အသွင်ပြောင်း။
လူဦးရေကနေအလွန်ချစ်ပွင့်လင်းပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်ကိုအသုံးပြုပါ။ အမြင်အာရုံ, သူတို့ကအလေးခြိနှင့်အခန်း၏ parameters တွေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းလေကြောင်းကြည့်ရှုပါ။ ပွင့်လင်းပလပ်စတစ်ထမင်းစားခန်းကုလားထိုင်သူတို့တစ်တွေသေးငယ်တဲ့အာကာသအတွင်းအလင်း၏အထင်အမြင်ကိုထောကျပံ့, မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတစ်ဦးဖန်နှင့်သစ်သားအဖြစ်ပလပ်စတစ်စားပွဲအကြီးအကြည့်ရှုပါ။
လုံးဝအရောင်မော်ဒယ်များအပြင်သင်ဝေါလ်ပေ၏အရောင်နှင့်လျော်ညီဖြစ်ကြောင်းတင့်တဲ့ options တွေကိုကုလားကာ, ကြမ်းခင်းကော်ဇောရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆင်ပြေဘို့, အဲဒီကုလားထိုင်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုခေါင်းအုံး stacked နိုင်ပါသည်။ ရောင်းချခြင်းပွင့်လင်းမော်ဒယ်များ on:
စတုဂံ backrest နှင့်အတူကုလားထိုင်;
rounded backrest နှင့်အတူကုလားထိုင်;
functional ကုလားထိုင်အာကာသကယ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပလပ်စတစ် collapsible ။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အခငျြးခငျြးတစျရပျမှပြန်စီဖို့လွယ်ကူပါ, ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအသေးစားနေရာများ, အလင်းနှင့်အကြမ်းခံ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ပါစေ။ အဓိကအားသာချက် - မကြာခဏပြင်ပဖြစ်ရပ်များ, ပျော်ပွဲစား, ငါးဖမ်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်တိုင်းပြည်အိမျတျောကိုပေးစေခြင်းငှါအတှကျအသုံးပွုသောလျင်မြန်စွာခေါက်နိုင်စွမ်း။ ခေါက်ကုလားထိုင်ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ် - backrest နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲတစ်ဦးတေးသံထိုင်ခုံမကြာခဏပုံမှန်ခေတ်မှီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။
သူတို့ကအလွယ်တကူသယ်ဆောင်သို့မဟုတ်ဝှက်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသောအပြားအပိုင်းအစသို့သည်ပုံပျက်နေသောနေကြသည်တစ်တင်းကျပ်သောဂျီဩမေတြီသို့မဟုတ်မည်သည့်ဖန်စီအသွင်သဏ္ဌာန်ရှိနိုင်ပါသည်။ ခေါက်၏ယန္တရားအသေးစိတ်ဖို့ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်။ ခေါက်ကုလားထိုင်ဥယျာဉ်နှင့်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်သာ ခရီးသွားဧည့်ပရိဘောဂ , ဒါပေမယ့်လည်းကျယ်ပြန့်လုံလောက်စွာဧည့်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အိမ်နှင့်အကူအညီမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦး backrest နှင့်အတူပလတ်စတစ်ကုလားထိုင်
နောက်ကျောနှင့်အတူအဆင်ပြေပလပ်စတစ်ကုလားထိုင် - အလွန်လူကြိုက်များ option ကို။ သူတို့ဟာဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာနှင့်အတူပိုမိုရှုထောင်မော်ဒယ်များမှဆန့်ကျင်အဖြစ်အလွယ်တကူစားပွဲအောက်၌ slides, အများကြီးအာကာသကိုတက်ယူကြဘူး, မဆိုပုံစံမျိုးသို့ fit ရန်လွယ်ကူပိုပြီးစွယ်စုံဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များများ၏ထုတ်လုပ်မှုများတွင်ဒီဇိုင်နာများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖေါ်ပြခြင်းနေကြသည်။ သငျသညျမွငျ့မားသို့မဟုတ်အနိမ့်ပြန်, ပြင်းထန်, ထူးထူးဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးစုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်အတူရွေးချယ်စရာရှာတှေ့နိုငျ - ပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်တောက်ပပလပ်စတစ်၏ Deco စတိုင်လ်, ပွင့်လင်း, High-နည်းပညာမော်ဒယ်ဖြစ်၏ချောမွေ့ကောက်ကြောင်းနှင့်အတူခေတ်မီ၏ထုတ်ကုန်ထုတ်ခဲ့။
သတ္တုပေါ်မှာပလပ်စတစ်၏ပရိဘောဂ - ကြံ့ခိုင်, အလေးချိန်အများကြီးကိုဆီးတားနိုင်။ စည်းကမ်းအဖြစ်ကျနော်တို့ chrome finish ကိုအတူလူမီနီယံအခြေစိုက်စခန်းအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ထိုသို့သောထုတ်ကုန် backrest နှင့်ထိုင်ခုံဘက်စုံနှင့် openwork ရက်မဟုတ်အထူးသဖြင့်လျှင်, ပိုတာရှည်ခံများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ သတ္တုပုံပျက်သောနှင့်ကျိုးဖို့လျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပလတ်စတစ်မှမတူဘဲထောက်ခံပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောပရိဘောဂများ၏ခြေထောက်များ, အလွန်ပီပီပုံစံမျိုးစုံဖြစ်တစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအထောက်အကူရှိသည်, တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကွေးပရိုဖိုင်းများမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖို့အတွက်လက်မောင်းဒာရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ သတ္တုထောက်ခံမှုအပေါ်ပလပ်စတစ်မြင့်မားသောကုလားထိုင် - ခိုင်မာတဲ့နှင့်တာရှည်ခံမကြာခဏကကုန်ပစ္စည်းအမြင့်ကိုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်တပ်ဆင်ထားသည်။ စတိုင်မှာ chrome ဘောင်နှင့်အတူပွင့်လင်းထိုင်ခုံကြည့်, ဒီပရိဘောဂများ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအတွက်ဒီဇိုင်နာများအသုံးပြု အတွင်းပိုင်းက high-tech ။
သစ်သားခြေထောက်၏ပုံစံအတွက်ခေတ်မီထို့အပြင်နှင့်အတူမူရင်းပလပ်စတစ်ကုလားထိုင်ပရိဘောဂများ၏ဒီဇိုင်းကိုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ ပေါက်၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးတင်းကျပ်သောပုံစံ, လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Ergonomics ကောက်ကြောင်း - ထိုသို့သောမော်ဒယ်များမှာထိုင်ခုံနှင့် backrest ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲအတွက်လုပ်နေကြသည်။ ထိပ်ထုတ်ကုန်များ၏အရောင်ကိုသငျသညျမဆိုဖွင့်ကောက်နိုင် - ဂန္တဝင်အနေဖြင့်အများဆုံးတောက်ပနှင့် variegated ရန်။
ပလပ်စတစ်နဲ့ထုပ်နဲ့သတ္တုဘောင်တို့ကအားဖြည့်လေး spitsevidnyh စုံစုံတိုင်ပုံစံလုပ်သောကုလားထိုင်၏ခြေထောက်များ။ သစ်ပင်အလှဆင်ဒီဇိုင်းဘာသာရပ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်နှင့်အထူးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်ပလပ်စတစ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီဇိုင်း၏ဘက်စုံသုံး - ကျန်ကြွင်းသောအရပ်သို့မဟုတ်ရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ်အိမ်တွင်းအပေါ်, ဧည့်ခန်းထဲမှာကုလားထိုင်တည်ထောင်ရန်အခွင့်အလမ်း။
အဘယ်အရာကို pokleit ဝေါလ်ပေအခန်းတစ်ခန်း?
အတွင်းပိုင်းများတွင်အရောင်ပေါင်းစပ် - ကုလားကာနှင့်ဝေါလ်ပေပါ
မီးဖိုချောင်ဘို့က Short ကုလားကာ
အကြံပေးချက်များပျူငှါနွေးထွေးသောနှင့်နှစ်သိမ့်ကိုဖန်တီးရန် - အိပ်ခန်း Making
ခန္ဓာကိုယ် varicose သွေးပြန်ကြောနှင့်အတူအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထုပ်
Keratosis - ကဘာလဲနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံဖို့?
အိမ်တွင်အနက်ရောင် Currant ကနေစပျစ်ရည်ကို
Modular စက္ကူခေါက်ခြင်း - ရှားစောင်းပင်
Deadlift - အမျိုးအစားများနှင့်မည်သို့ deadlift လုပ်ဖို့?
ဂျော်နီ Depp ၏အမြင့်နှင့်အလေးချိန်
ပရိဘောဂ - စာအုပ်တင်စင်
Belogolovnik - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
ကလေးများအတွက် Diathesis - ထိုအကြောင်းတရားများ, သရုပ်နှင့်ကုသမှုတွေအကြောင်းတပြင်လုံးကိုအမှန်တရား